Sunday April 26, 2020 - 19:29:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dadka udhintay Carona Virus ayaa gaaray 200 oo kun oo ruux sida lagu xaqiijiyay warbixinno caafimaad oo soo baxay gelinkii dambe ee maalintii sabtida.
wakaaladda wararka AP ayaa sheegtay in dadka uu asiibay carona ay kor udhaafeen sedax milyan oo ruux, saacadihii lasoo dhaafay tirada dhimashada ayaa sare ukacday wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska oo dad badan aasay.
warbixinadu waxay sheegayaan in dadka ladiiwaan geliyay ee Carona udhintay ay gaareen laba boqoloo kun iyo 736 ruux halka dadka cudurkan ka bogsooday ay gaareen 773 kun oo ruux, nisbada dadka Carona udhintay waa 4% waana tira aad uga yar cuduradii laayaanka ahaa ee horay uga dilaaci jiray caalamka kuwaas oo dadka ay haleelaan ay dhiman jireen inta udhaxaysa 30% illaa 20%.
Dalka ingiriiska shalay kaliya waxaa ku dhintay 813 ruux taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 20,319 ruux, afar dal oo dhaca qaaradda Yurub ayaa kujira xayndaabka 20 kun eedhanka dhimasha dowladahaas ayaa kala ah Talyaaniga oo dhimashadu gaartay 26,384 qof, Spain oo dhimashadu gaartay 22,902 qof Faransiiska oo dhimashadu ay gaartay 22,614 iyo ingiriiska oo dhimashadu ay gaartay 20,319.
wadanka Mareykanka shalay waxaa Covid19 ugu dhintay dad gaaraya 2494 ruux waana dhimashadii ugu badnaa oo maalin qura lasoo calaamadeeyay muddo ku siman hal isbuuc, jaamacaadda caafimaad ee Johns Hopkins ayaa sheegtay in tirada guud ee dhimashada mareykanka ay gaartay 53,511 ryyx halka dadka dadka bukaanada ah ee cudurkan lajiifa ay kudhowyihiin hal malyan oo ruux.
inta badan ganacsigii isaga kala gooshi jiray caalamka ayaa hakad kujira waxaana si gaabis ah ku shaqeynaya suuqayada maaliyadda adduunka,warbixinno soo baxay waxay sheegayeen in sare kac uu ku yimid macashiidda wadamada qaaradda Yurub iyo aasiya oo saameyn xun uu ku reebay Carona Virus.